Xisbiga Kulmiye Iyo Xukuumadiisu Waxay Noqdeen Madaxgeel, Madaxgeelna Nin Qaadaaba Wuu Dhigi.
Monday April 15, 2019 - 11:26:04 in Articles by Hadhwanaag News
Haddaynu Taariikhda Kulmiye dib u eegno ,wadanka wax uu yeelo mooyee waxba USOO kordhinmaayo.
Mabda iisa koobaad waa inuu dadku qaybsanaado oo marna shacab mid qudha ahi aanuu jirin ,xaqiiqada maanta taallaana waa in gobol gobol loo qaybsanyey oo weliba laba gobol dagaalo Jabhadeed oo sii kordhaya markasta ay jiraan OO WELIBA dhinaca Somalia oo ah dalkii ay Somaliland isku darsigii dib uga noqotay oo ah cadawga Somaliland sida DJABOUTI Daladeeduba u yahay cadawga Somaliland. Waxaynu u soo joognay Xukuumaddii Siilaanyo Ka xanuunsaday mandaqaddii lacag urursiga ahaa ee dhabarka Ka jebiyey dhaqaalaha wadanka ee in Yari jeebadaa KU guratay Sida Ismail Omer GEELLE DJABOUTI Ka yeelay. inaan Xukuumaddii Muse Biixi ee Kulmiye dhibtii waxba Ka qaban ay imika caddaatay inaanay waxba Ka qabanayn Madaxweynuhuna yahay sidii Siilaanyo qof wufuud wax ay u socdaan aan la garanayn si indha Sarcaadka shacabka lagu khaweysiinayo badina Xukuumaddaa. Xukuumadda KULMIYE marbqudhaa jiha wareerkeeda wasiiradii ugu tunka weynaa Ka dareereen , Madaxweynihii OO patient ah baa lasoo sarajoojinayey, waxay ahayd khiyaamo qaran in Maxkamad la soo taagay ahayd isagiyo dembiilayaashoo dhan. Waxaa a iska dhig KULMIYE dariiqa Ismail Omer GEELLE ayuu KU deyayaa Inay SOMALILAND KU dhacdo Xusbi qudha oo in Yari wadanka KU faashleeyaan kama socon karayso SOMALILAND. Ismail Omer GEELLE DB World laba Shay baa la isku dilay Maxaa Berbera u Degteen, iyo Ina Boore Ka saara heshiiska Dekedda Dooraaleh OO isna Gacanta ii soo geliya waayo Ina Boore Sir weyn buy Ismail Ka hayaa inuu diluu rabaana. Dubai way Ka diiday markaa suu boobay oo eryey. Halkii buu Somaliland na KU yidhi Axmed Osman Geelle Arab na wershadda Ka xidha dabadeed Gacanta ii Soo geliya waayo Wershadda lacagtii DJABOUTI uu Ismai C. Geelle Ka DHACAY bay Ka samaysantay was been Bangiga lacagta laga Ammaahday wax badan baa bulshada Ka qarsoon weli.Ahmed Osman isagu DJABOUTI waxba kama dhicin ee Tuugu was Ismacil Omer GEELLE ee tijaarta uu lacagtii DJABOUTI KU qarsaday buu eryanayaa. buu qabashada Ahmed Osman soo Mariyey oo Muse Biixi halkaa bay arintu inaga soo gashay.Somaliland haddaanu iska Gaadhin ina Omer GEELLE Dhib baa KU Soo fooleh .WUU Ka yeelay sidaasay KU Timi In Hargeysa MAXKAMADDA muaamaraadka ah loo waday imikana khiyaamadii way socotaa . Hadduu Muse Ka diido Ismail waxbaa dhacaya weyn oo kale.
Ismail Omer GEELLE khadkiisii Maafiyada ahaa ayey Somaliland u gacan gashay, siraha Soo baxayaa waxay sheegeen xoolaha ama dhaqaalaha DJABOUTI ee saldhigyada kasoo gala IYO meelaha kaleba wasaaradda Maaliyadda ma tagaan ee isgay KU dhacaan toos dabadeed dad buu KU qortaa KU shaqeeya oo boqolokiiba lixdan ii soo celiyah , dabadeed shirkadii baa la isku qabsadaa waa taa sirta uu u eryadaa ragguu lacagtii DJABOUTI KU qarsaday ee ina Boore leh INA Geelle arab leh dabadeed raggaa INUU diluu doonaa waayo lacag khaliya maaha ee sir weyn bay HAYAAN oo xoolaha DJABOUTI uu INA Omer GEELLE galay kana Hadhimaayo. shirkado SOMALILAND jooga. Khadka hoggaanka Kulmiye raacay waa khadkaa Ismacil C Geelle DJABOUTI KU dhacay ayaa SOMALILAND na lagu DHACAYAA.
Sheekada Madaxtooyada Cusubi waxay la mid yahay Madaxtooyada Cusub ee DJABOUTI uu ina Cumar GEELLE Sameeyey. MARKAA SOMALILAND khatar buu hoggaankii Kulmiye dhex geliyey.